Indawo yokuhlala yaseKhaya yaseKyrgyz yesiNtu - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseKhaya yaseKyrgyz yesiNtu
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguKayyr
Ikhaya lam likwilali encinci ebizwa ngokuba yiOrgochor, kufutshane neendawo ezinomtsalane ezifana neKarakol, iJeti Oguz, kunye neMarco Polo. Kwikhaya lam, unokubona iintaba ezintle ezigqunywe likhephu. I-Wifi, igumbi lokuhlambela elitsha langaphakathi kunye nendlu yangasese, kunye nesidlo sakusasa zibandakanyiwe.
Ikhaya lam lineofisi, indawo yokundwendwela/yokuhlala, ishawari entsha yangaphakathi kunye nendlu yangasese, kunye namagumbi amabini okulala abanzi. Igumbi ngalinye linebhedi enye. Kwiindwendwe ezongezelelweyo, sinokwenza oomatrasi be-tushuk bendabuko phantsi. I-Wifi kunye nezixhobo zeshawa ezisisiseko zibandakanyiwe njengetawuli, isomisi seenwele, ishampu, kunye nesepha. Iti kunye nekofu ziya kuhlala zikhona.
I-Orgochor ikwiikhilomitha ezingama-35 ukusuka kwisixeko saseKarakol kunye nezinto ezinomtsalane ezikufutshane ezifana neJeti Oguz (imizuzu eyi-25) kunye neMarco Polo (i-16 km, i-20 min). IKarakol idume ngesiseko sayo sokutyibiliza ebusika kunye nokuba kufutshane neAltyn Arashan indawo yokukhwela intaba. E-Jeti Oguz, unokubona "iinkunzi ezisi-7" ezenza ilitye elibomvu kwaye unyukele kwingxangxasi ekufutshane. IMarco Polo yindawo ekuchithelwa kuyo iiholide kwichibi i-Issyk Kul kwaye idume ngamanxweme ayo anesanti. Ungathatha imva kwemini kwaye uqubhe echibini kunye nembono entle yeentaba.
Umbuki zindwendwe ngu- Kayyr
Ndiya kuhlala ndikhona ukukunceda ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Xa ufika e-Orgochor, ndiza kulinda ukukuthatha ndikuse ekhaya lethu. Ndingakubonisa izithethe zamaKyrgyz kunye nempahla enje ngeekalpaks, shyrdaks, kunye nesamovar. Ndizakuphakela isidlo sakusasa kusasa.
Ndiya kuhlala ndikhona ukukunceda ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Xa ufika e-Orgochor, ndiza kulinda ukukuthatha ndikuse ekhaya lethu. Ndingakubonisa izithethe zamaKyrgyz kuny…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Orgochor